Le ndlwana ikufuphi namanzi ase-Esthwaite, enemibono emangalisayo ngaphesheya kweLake ukuya eGrizedale. Ibekwe kwiihektare ezili-14 zemithi yamandulo, le ndlu inqabileyo yokwenene - i-retreat efanelekileyo. Kukho indawo enkulu yegadi esemthethweni, kwaye unokuzulazula ujikeleze umhlaba wabucala.
I-cottage ifakwe kakuhle kwaye ixhotyiswe kakuhle- iplani enkulu evulekileyo ekhitshini-igumbi lokutyela elinesitshisi selog, kunye negumbi lokuhlala elahlukileyo elinesinye isitshisi selog. Kukho amagumbi amabini okulala (aphindwe kabini kunye namawele), kunye negumbi lokuhlambela losapho, elineshawari ngaphezulu kwebhafu.
Igaraji yabucala inegumbi elaneleyo lokugcina iibhayisekile kunye nekiti okanye ufumane imoto yakho yezemidlalo enqabileyo i-undercover, kunye neenkuni ezininzi zesitshisi selog ukuze uhlale une-toast.
Isiqingatha sendlela phakathi kwe-Hawkshead kunye ne-Sawrey, unokuhamba ukusuka endlwini, kwiindlela ezinqanda indlela, kuyo naliphi na icala.
Izinto eziluncedo: Ilinen yebhedi & iitawuli, iTerrace, ukufudumeza, Izilwanyana zasekhaya zamkelekile;
Igumbi lokuhlambela: ibhafu kunye neshawari;
Igumbi lokulala: ibhedi ephindwe kabini;
Igumbi lokulala: Iibhedi ezimbini;
Ikhitshi: Umatshini wokuhlamba izitya, isitovu sokupheka, i-oveni, iketile yombane, imicrowave, ifriji;
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Claife